Iyo Yemagariro Midhiya Lifecycle | Martech Zone
Svondo, Kukadzi 12, 2012 Douglas Karr
Iyi infographic inonyatsoenderana nezano ratinoisira vatengi vedu mune yedu pasocial media agency:
Monitoring - isu tinoongorora zvese mhando uye indasitiri kuteedzera vatengi vedu.
ongorora - isu tinoongorora iyo mhando kuti tione chero nyaya dzine mukurumbira uye manzwiro. Isu tinoongorora iyo ndustry yekuwana mikana, kuongorora vakwikwidzi uye kubatsira kugadzira matekinoroji.
Shingairira - kushandisa masvikiro mukati memazano ako ese kwakakosha. Kukwidziridzwa kweimwe svikiro kuburikidza neiyo imwe, uye kuvaka matanho anosanganisira masimba esirivhi yega yega iri pakati pehurongwa hukuru hwemagariro.
Gadzira - Zvemagariro enhau ibasa rakaoma… saka kutsvaga mikana yekugadzirisa mashandiro nekumhan'ara kwakakosha kudzikisa kukanganiswa kwezviwanikwa zvinodiwa. Nekufamba kwenguva, kugadzirisa uye kubatanidza maitiro ako kunotora zvimwe zvezvinetso zvekushandisa kubva pamapfudzi ako uye iwe unogona kutarisa mukugadzirisa zvakanaka zano rako.
Iyo infographic pazasi yakafuridzirwa kubva kuUberVu chena bepa, iyo 4 Mbiru dzeSocial Media Kubudirira. Tarisa uone zvimwe zvinonakidza pamusoro pekuti vamwe vatengesi vari kufunga sei pamusoro pembiru ina dzemasocial media - kune dzimwe dzinonakidza uye dzinopokana-nhamba manhamba imomo.
Kukadzi 12, 2012 na11: 03 PM
Inobatsira kwazvo Douglas. Zvemagariro midhiya zvasvika chaizvo munzira refu. Hatina kumbonzwa nezvazvo zvisati zvaitika, asi ichi chinhu vanhu vasingakwanise kurarama vasina nhasi.